Famokarana - Filter Tech
Miantehitra amin'ny tombotsoan'ny loharanon-karena indostrialy an'ny Runner Group sy ny traikefa fitsaboana amin'ny rano nandritra ny taona maro, ny Filter Tech dia nahatsapa ny fiarahan'ny haitao mandroso mandroso sy ny lamin'ny vokatra fanivanana rano efa misy.
Nanamboatra atrikasa manan-tsaina malefaka izahay mba hahatratrarana ny fanovana ny fivorian'ny fiangonana. Ny fiasan'ny synchronous dia ahafahantsika manomboka asa mihoatra ny iray miaraka izay mamorona rafitra fiasa mahomby kokoa ary manome vahaolana manokana.
Amin'ny fampiasana fitaovana marobe mandeha ho azy toy ny robot, sensor, rafitra mpanera mandeha ho azy mba hananana asa an-tanana, dia nahavita automation ny tsindrona, ny famolavolana sivana, ny fivorian'ny vokatra, ny fitsirihana ny vokatra mba hanatsarana ny fahombiazan'ny asa.
Amin'ny alàlan'ny famoronana ny Integration of Informatization and Industrialization platform, dia tsapantsika tsikelikely ny fitantanana ny fampahalalana momba ny varotra, ny R&D, ny rojom-panomezana ary ny asan'ny fikambanana.
Hetsika marobe no mitranga amin'ny toe-javatra iasana
Ny automation dia manampy amin'ny famitana tetikasa miaraka amin'ny mpiasa vitsy kokoa ary mampitombo ny vokatra
Fampiroboroboana ny informatization
Mahatratra tsikelikely ny fanavaozana ny asa aman-draharaha sy ny fanavaozana ny fitantanana
Ny herin'ny RPS
Mamorona fiainam-baovao mahasalama, azo antoka sy maitso
Hatramin'ny 2010, izahay dia niara-niasa tamin'ny orinasa consultant an'ny Toyota Group hampahafantatra ny fitantanana Lean. Raha tokony hampiasa azy tanteraka izahay dia nampiditra ny fanahin'ny TPS (Toyota Production System) ho amin'ny tena filàn'ny orinasantsika, izay nahatonga ny fivoaran'ny foto-kevitray RPS (Runner Production System). Mba hanomezana anao vokatra sarobidy kokoa, nampiharina fanatsarana RPS izahay hahatsapa ny fanatsarana ny fitantanana mahia sy ny fanatsarana kalitao. Ankoatr'izay, isan-taona dia mandeha mianatra amin'ny Toyota miaraka amin'ireo mpamatsy anay izahay. Ny rafitra, izay nohavaozina tato anatin'ny folo taona lasa, dia manome antsika antoka amin'ny loharanon-karena kalitao manerana ny rojom-bidy, mamela anay hanompo anao amin'ny fifaninanana bebe kokoa.
Miara-miasa amin'ireo mpamatsy anay izahay mba hampitombo ny fiaraha-miasa sy ny fampidirana loharanon-karena. Ny fampiasam-bola amin'ny loharanon-karena sy ny fanaovana outsourcing ny fizotrany tsy misy fanakianana dia ahafahantsika manome serivisy amin'ny fandaniana ara-dalàna.
Atmosfera Miasa Maitso
Miezaka izahay mba hamorona tontolo iainana miasa ho an'ny mpiasa, hanangana atrikasa fanadiovana tsy misy vovoka, hametraka dingana famokarana madio, mahasalama ary mahomby. Raha ara-teknika dia ampidirinay ao amin'ny vokatray ny "maintso", "ny fahasalamana", ny "intelligence intelligence" ary ny fiainana hafa mba hahafahanao mankafy traikefa mahaolona sy fiainana tsara kokoa.
Fampidirana rojom-bidy manome lanja
Miara-miasa amin'ireo mpamatsy anay, ny Filter Tech dia manamafy ny fifandraisana ara-indostrialy, mampiditra ireo loharano anatiny sy ivelany, manangana sehatra fiaraha-miasa miaraka amin'ny famatsiana, mametraka lanja manara-penitra ny logistics supply chain, izay ahafahan'ny Filter Tech mamaly haingana ny zavatra ilainao, manatsara ny vidiny ary manome vahaolana tsara kokoa ho anao.
Rafitra Osmosis Reverse tsara indrindra, Fanoloana sivana amin'ny cartridge amin'ny rano, Fanadiovan-drano ho an'ny rano mafy, Paompy Rafitra fanivanana rano, Mpanadio rano amin'ny trano iray manontolo, Sarina cartridges,